Ị nwere ike ịgwa m otu esi ewusi backlinks na 2016 na Web 2. 0 njikọ njikọ?
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị lee ya anya - Web 2. Mmekọrịta njikọ na-arụ ọrụ! Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta otú e si ewu backlinks na 2016, na-ewere uru dị mma nke Web 2 kasị mma. Mmekọrịta ọrụ njikọ, ka anyị lelee anya na nso nso. Ebumnuche anyị bụ ịkwalite nkwalite ọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog - na-enweghị nsogbu nke njirimara onye ọrụ nke ndị na-enyocha ndụ. Ma, n'ezie, ịchọrọ ịme ihe ọ bụla iji gbochie ịbụ onye a na-enyo enyo na iji usoro ma ọ bụ atụmatụ ọ bụla na-adịghị anakwere. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịga maka imebi isi akwụkwọ ntụziaka weebụ ma wee nweta onwe gị nnukwu ụgwọ ọrụ ogo. Ọ bụ ya mere m ga - eji gosi gị otu esi arụghachi azụlinks na 2016 ụzọ kachasị mma na nke kasị dịrị nchebe, ọ bụghị iji kụdaa Google.
Otú ọ dị, buru n'uche na ị ga-erite uru site na ịmepụta Web 2. 0 backlinks ị kwesịrị ị na-agba ọsọ n'ime usoro ziri ezi n'ozuzu SEO atụmatụ. Nke ahụ ga-adị gị mkpa itinye oge na mgbalị dị ukwuu n'ịmepụta nanị ọrụ njikọ dị mma nke nwere ike ịnye ezigbo uru na ndị ọbịa gị. Ma ọ bụghị ya, ebe nrụọrụ weebụ gị ga-ebuli ọkọlọtọ ọkọlọtọ na Google, nke ahụ na-ejikarị nkwụsị dị elu - n'oge na-adịghị anya. Ọ bụ ya mere na ị ghaghị ịmepụtụghị ebe nrụọrụ weebụ ndị ahụ na-ekwe nkwa nchịkọta dị iche iche na-ere na nnukwu, ma ọ bụ ọbụna nnukwu igbe nke azụmaahịa HQ backlinks - na okwu mkparị ha na-azọrọ na ha niile backlinks bụ naanị site na ikikere na n'elu PR nrụọrụ weebụ na blọọgụ.
Ọ bụ naanị okwu ịdọ aka ná ntị m ziri ezi ka ị wee were ya - ịsọ ọsọ maka ngwa ngwa pụtara na ọ bụghị nanị na ị ga-efufu ego ahụ siri ike, ma mee ka ihe niile bụrụ ihe a na-apụghị ịkọchapụta ma yie ka ọ ga-emerụ ahụ karịa ezi. Yabụ, ka anyị laghachi azụ - ịmepụta Web 2. 0 njikọ ndị nwere ike ịmepụta ihe kachasị mma na SEO. N'okpuru ebe a, e depụtara ndepụta nke isi ihe ịma aka maka ị ghọtara otu esi eme ka azụlinks na 2016 - ụzọ ziri ezi.
Wụlite Ịntanetị Ịntanetị
Wụlite ntọala kwesịrị ekwesị maka ebe mmekọrịta gị na azụmahịa ma ọ bụ blog na-adịte aka.Nzọụkwụ mbụ gị ebe a bụ iji mezue profaịlụ gị na Weebụ 2 dị mkpa. 0 ebe nrụọrụ weebụ na-emetụta niche gị ma ọ bụ mkparịta ụka isiokwu. Ya mere, aga m achọpụta otú e si ewu backlinks na 2016 malite na mbido - ka anyị malite site n'ịmecha profaịlụ gị na ebe ndị a na-esonụ:
jupụta akwụkwọ nkeonwe gị na Google My Business;
mepụta ibe gi na Yelp;
akụkọ zuru oke na akụkọ Twitter, Facebook, LinkedIn;
gaa n'ihu na ntinye akwukwọ ntụle njikọ nkwenye;
gaa na nleta (ga-eme ma ọ bụrụ na ị na-emekọrịta B2B, ma ọ bụ azụmahịa gị nwere mpaghara brick na-mortar).
Chọpụta aha njirimara
Ozugbo ihe ndekọ akụkọ ahụ na saịtị profaịlụ dị, ọ bụ oge itinye njikọ dị na saịtị gị isi onye ọ bụla. N'ịme nke ahụ, echefula ịtọchi njikọ ọhụrụ gị na isiokwu ederede ziri ezi. Ntughari: inwe blog dị mma ma ọ bụ akwụkwọ nkwado akwadoro na Ajụjụ & Azịza (dị ka Quora). Nke ahụ na-arụ ọrụ dị ka hel!
Mepụta Peeji Akwukwo
N'ikpeazụ, ihe niile ị ga - eme bụ iji gbochie ụwa SEO, ma rụọ ọrụ nke ọma na ọdịnaya dị mma nke na - enye ndị ọrụ ọnụahịa. Iji mee ka ihe niile dị mma, ị kwesịrị itinye uche na ihe ndị na-esonụ:
ịdebe ọdịnaya na-atọ ụtọ iji jikọta ya mgbe ụfọdụ;
ụlọ ihe karịrị njikọ ise n'izu;
na-ebipụta mgbasa ozi mgbasa ozi na blọgụ blog, bọtịnụ fanyere Facebook, WordPress blogs, akụkọ na Instagram, na vidiyo vidiyo na YouTube Source .